Rohingya Students Forum: အာလ်ဗေဒါ နိုးဆော်တေး [Alveda]
အာလ်ဗေဒါ နိုးဆော်တေး [Alveda]
ပုံ- အညာဒေသ၊ RK ရေးဆွဲ
အလ်ဗေဒါသည် ညအိပ်စက်သူ အပေါင်းတို့အား ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန် အိပ်ရာမှ နိုးပေးအပ်သော ရိုဟင်ဂျာရိုးရာ တေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ရမဒွါန် ဝါလတွင်း သန်းခေါင်ကျော် တွင် အိပ်ရာမှ နိုးပေးသော နိုးဆော်တေး တစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ရမဒါန်လ [ရိုဟင်ဂျာ အခေါ် ရုဇာစ္စာန်] ရောက်လာသည့်နှင့် တပြိုင်နက် ရိုဟင်ဂျာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု တစ်ခုသည် မိုးရေရရှိ၍ အဖူးသစ် အပွင့်သစ် ဖူးပွင့်လာသကဲ့သို့ ရှင်သန်လာလေသည်။ ယင်းကား အခြားမဟုတ် အလ်ဗေဒါ တေးသံပင် ဖြစ်သည်။ ယင်းသံကား ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန် နိုးဆော်သော တေးသံဖြစ်သည်။ နိဗ္ဗာန်ဆော်သံတည်း။ အလ်ဗေဒါ သည် အရဗီဘာသာ စကားမှ ဆင်းသက်လာသော မွေးစား စကားလုံးဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပာယ်မှာ “ခွဲခွာခြင်း” ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ညအိပ်ရာမှ ခွဲခွာခြင်းဖြစ်သည်။
ဟိုးရှေးခေတ် စပီကာများ၊ အသံချဲ့စက်များ မပေါ်သေးသည့် ကာလမှာ စဟေရီ အချိန် အိပ်ရာမှတက်ပြီး အချိန်မီ ဝါချည်ရန် အခက်အခဲများ ရှိခဲ့သည်။ အိစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များသည် အမျိုးမျိုးသော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ နာရီများလည်း မပေါ်သေးချေ။ ထိုအခါ လူတို့သည် ဦးချိုတံပိုး [ချီးညာ] မှုတ်၍ သော်လည်းကောင်း၊ ကုလားတက်များ [တက်ခ်] ၊ မောင်း တီး၍သော်လည်းကောင်း အချိန်များကို သတိပေး နိုးဆော်ပေးကြသည်။
ရမဒါန်လတွင်မူ ဦးချိုတံပိုး မှုတ်သည့်အပြင် ကျေးရွာလူငယ်လူပျိုများ စုပေါင်းကာ လူ (၁၀)ယောက်၊ (၁၂)ယောက်စီ အုပ်စု တစ်ဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ ဖွဲ့ကာ စဟေရီချိန် နိုးဆော်ရန်အတွက် သီချင်းများကို အပြိုင်အဆိုင် ဖွဲ့ဆိုကြသည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တွင် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးစီ သတ်မှတ်ပေးကြသည်။ တစ်ဖွဲ့ တစ်ရက်စီ၊ တပတ်စီ စသည်ဖြင့် တာဝန်ယူကြသည်။ ပြီးနောက် သန်းခေါင်ကျော် ၃ ချက်တီးလောက်တွင် ထိုလူငယ်အဖွဲ့သည် သီချင်းများကို တညီညီ တချိုချို အော်ဟစ် ဆိုကာ ရွာတစ်ခုလုံးလည်ပတ်၍ အိပ်မောကျနေသည့် လူများကို ဝါချည်ရန် နိုးဆော်ပေးကြပါသည်။ “အို အလ္လာဟ့် ကျေးကျွန်အပေါင်းတို့၊ အိပ်ရာမှ ထကြလော၊ ဥပုသ် တည်ဆောက်ကြလော၊ ကောင်းမှု ကုသိုလ်ပြုကြလော” စသည်ဖြင့် နိဗ္ဗာန်အကျိုးကို ညွှန်ပြခေါ်ခြင်း၊ ကြား၌ အလ်ဗေဒါတေးများကို ညီညီညာညာ ဆိုခြင်းဖြင့် ရွာလည်း တညံညံဖြစ်လာ၍ လူတို့လည်း အိပ်ရာမှ နိုးလာကာ ဝါချည်ရန် ပြင်ဆင်ကြလေသည်။
အလ်ဗေဒါ လူငယ်အဖွဲ့သည် ညတိုင်းညတိုင်း ရွာကို တစ်ပတ်၊ နှစ်ပတ်လည်ကာ နိုးဆော်ကြသည်။ ထိုအလ်ဗေဒါ တေးသံသည် လူတို့၏ စိတ်ကို ကြည်နူးစေသည်။ ကောင်းမှု ကုသိုလ်ပြုလုပ်ရန် စိတ်နုများ တစိမ့်စိမ့် ဖွားလာကြသည်။ ဥဒါဟရုဏ် အဖြစ် အလ်ဗေဒါတေး တစ်ပိုဒ်၊ နှစ်ပိုဒ်ကို အောက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Añrá lee rekkwá juwan
Bañgi zargoi mosít gán
Mosítór lá kíyal goillé
Faiba Jonnot gán.
Cúkkur bare Juma ailé
nomaz forthé Mosít nokula,
Zár baricá Mosit táke ekhélá.
ရမဇာန်လ ကုန်ဆုံးမည့် နောက်ဆုံးည သရဝီ[မြတ်တမန်တော် စွန္နတ်တော်အရ ဥပုသ်ဆောက်ရန် ဝတ်ပြုရသော နုမာဇ်တစ်မျိုး] အပြီးတွင် ထို အလ်ဗေဒါ လူငယ်လူပျိုအဖွဲ့များကို သက်ဆိုင်ရာ ရပ်ကွက်ကျေးရွာမှ ဆုလာဘ်ငွေများ၊ အဝတ်တန်ဆာများ ချီးမြင့်ပေးကြသည်။ ၎င်းဆုငွေကို အလ်ဗေဒါ လူငယ်အဖွဲ့ဝင်များက အညီအမျှ ခွဲဝေ ယူကြလေသည်။ မနက်ဖြန် အိဒ်ပွဲသို့ သုံးဆောင်မည့် အသုံးစရိတ် ရရှိသွားသဖြင့် အလွန်ပင် ပျော်ရွှင်ကြလေသည်။ ပျော်…ပျော် နွှဲကြပေါ့ …
အာလ်ဗေဒါနှင့် အလွမ်းကို ကဗျာဆရာများက အမျိုးမျိုး စာပန်းချီရေးခြယ်ကြသည်။ ကဗျာဆရာ မောင်လတ်က ရေးဖွဲ့ခဲ့သော အာလ်ဗေဒါ ကဗျာကို စာရှုသူတို့ ဖတ်ရှုခံစားနိုင်ရန် ရင်ခုန်သံကဗျာဥယျာဉ် ကဗျာစာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပေးပါသည်။
ကဗျာဆရာသည် မိမိငယ်စဉ်အခါ မိမိ၏မွေးရပ်ဇာတိ၌ ပျော်ဖူးခဲ့သည့် အလ်ဗေဒါ တေးသံများကို လွမ်းနေကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ “တုနှိုင်းမမီ ဘယ်သံစဉ်” ဟူ၍ မည်သည့် သံစဉ်မှ အလ်ဗေဒါ တေးသံလောက် ကြည်နူးနိုင်သည် မရှိဟု တင်စားရေးဖွဲ့ထားသည်။
နောက်ပိုင်းကာလတွင် အလ်ဗေဒါသည် တဖြေးဖြေး အားပျော့လာခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ အသံချဲ့စက်များ ခေတ်စားလာသည်နှင့်အမျှ အလ်ဗေဒါလည်း ပျောက်ကွယ်လာသည်။ ရိုဟင်ဂျာတို့သည် အလ်ဗေဒါတေး အစား နာသီယာ ခေါ် ဘာသာရေး ဂုဏ်ရည်ဖွဲ့ တေးကို အစားထိုးလာခဲ့သည်။ ရမဒွါန်ရောက်တိုင်း ကျေးရွာရပ်ကွက်တိုင်းမှ အသံချဲ့စက်များ တညံညံဖွင့်ကာ နာသီယာတေးများ သီဆိုပေးကြကာ အိပ်ရာမှ ထ၍ ဝါချည်ရန် နိုးပေးကြသည်။
ရိုဟင်ဂျာတို့၏ ရှေးယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးစံ တစ်ခုဖြစ်သော အလ်ဗေဒါ ကို မပျောက်ကွယ်နိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းကြပါစို့။
Posted by Rohang king at 4:31 PM
Labels: ရိုးရာ, ရိုသမိုင်း, Gana, သုတ, ဆောင်းပါး
ခေတ်အဆက်ဆက်က သင်ပုန်းကြီးဖတ်စာ ကဗျာလေးများ
လသာချိန် ကစားမလား၊ ရိုကစားနည်းနဲ့ မြူးထူးကြ
Prince Qajar (သို့မဟုတ်) အလှတရားရဲ့ နိယာမကို တော်လ...